Jooji walaac ku saabsan Win32 / Zum! Trojan! Cudurka Dabaysha ayaa muujinaya Tilmaamaha Anti-Virus
Win32 / Zum! Trojan, sida magacu soo jeediyo, waa nacas Trojan ah oo sameeya khayaano qarsoodi ahee Windows PCs. Ma ogaan kartid illaa uu bilowdo waxqabadka malawadka. Marka hore, waxay joojinaysaa antivirus si looga hortago ogaanshaha.Kadibna waxay isku meel dhigtaa diiwaanka halkaasoo ay ku hayso bedelka goobta si ay ugu qallibanto dadka isticmaala - klein transport. Xitaa wali, Win32 / Zum!Nuqullo lafteedu waxay markaas ku faaftaa nidaamyada faylasha kale. Iyo haddii aad waqti badan ku qaataan internetka, ka dibna xayeysiinta qalabka casriga ah iyofayras ka yimid server fog. Waa riwaayad uun oo ka fakaraysa burburka ay keeni karto.
Khabiirka ugu horreeya ee ka socda Sare ,Julia Vashneva, ayaa qeexday tilmaamaha qiimaha leh ee ku saabsan sidii looga takhalusi lahaa fayraska.
Sidee ayaad ku qaadi kartaa cudurka?
Waxaad heli kartaa Win32 / Zum / Trojan iyada oo loo marayo:
faylasha la wadaago shabakada p2p, torrents
darawalada infekshanka leh
oo riixaya meelaha laga shakiyo, isku xirnaanta, iyo xayeysiisyada qaarkood
Marka trojan uu infected PC, mashiinku wuxuu bilaabmayaa in lagala baxo, barnaamijyada qaarku fashilmaan inay fuliyaan khaladaad, barta shabakadu waxay ku jirtaa burburinta xogtaada gaarka ahna waa la xadi karaa kadibna waxaa loo isticmaali karaa in lagu caydhsadolacag. Xaaladda dhibcaha, macluumaadka kaararka deymaha ayaa loo isticmaali karaa caano aad qalalan tahay. Sidaa darteed, sideed uga saari kartaa Win32 / Zum! Trojan? Akhri si aad u ogaato.
Waxaa jira laba siyaabood oo isku dayey oo la isku dayey in ay ka saareen Win32 / Zum!.Adigawaxay dooran karaan inay raacaan buugga ama habka software-ku-salaysan. Dhawaaqa ayaa ka takhalusi kara miyir-qabka oo leh xaddiga soo noqoshada eber. Xaqiiqdii, waa maxaykhabiiro ayaa kugula talin lahaa inaad maskaxda ku hayso waqtiga aad qaadatey si aad gacantaada uga saarto xajinta.
Inaad tagto jidka gacanta
Talaabada 1aad: Ku bilaw ama furo kombuyutarkaaga INA hab ammaan leh oo isku xira
u gudub liiska bilowga
marka nidaamku uu bilaabmayo "F8" (badhanka)
boodh aad u sarreeya ayaa ka muuqda
dooro "qaab nabadgelyo leh shabakad" kadibna riix badhanka gelitaanka
Talaabada 2aad: Dilka khayaanada isticmaalaya maamulaha hawsha
riix batoonka 'Alt', 'Ctrl' iyo 'Del' isku mar
daaqada hawsha suuqa ayaa ka soo baxaysa shaashadda
ku saabsan habka tabka, aqoonsadaan oo dilaan habka. Kaliya guji isla markaana dooro 'Dhamaystirka Hawlaha'
Talaabada 3aad: Ka saar shaashadda Win32 / Zum!
Tilaabada 4aad: Ka saar ereyada dheeraadka ah Win32 / Zum! Extensions browser ee Mozilla, Chrome,Internet Explorer, Opera ama calaamad kasta oo aad isticmaasho
Tallaabada 5: Ka saar dhammaan faylasha Win32 / Zum! Faylasha diiwaanka
riix daaqadaha (W) iyo R-tu oo isku mar ah
sanduuq qulqulaya ayaa soo baxaya. Nooca 'regedit' kadibna OK
raadi oo tirtirto dhammaan faylasha xunxun
Khatartu waa ka baxdaa. Ku raaxee nabadda maskaxda.
Ka qaadidda Win32 / Zum! Trojan oo isticmaalaya software
Isticmaalida software adag oo ka hortag ah software waa habka ugu sahlan ee ugu fiicanka takhalusi Win32 / Zum! Trojan. Barnaamijka wuxuu sameeyaa scan dhakhso ah oo dhamaystiran dhammaan faylasha oo ay ku jiraan keyloggers iyo rootkit. Waawuxuu xayiraa xayawaan-bixiyeyaasha inta ay bixiyaan difaac dhab ah oo ka imanaya hanjabaado kale. SpyHunter waa barnaamij wanaagsan oo liddi ku ah anti-malware, waana wax ka shaqeeya dhamaantoodNuqulada Windows. Sii diyaargarow oo ka ilaali jiilka weerarka Trojan.